Afrika, 02 July 2019
Talaado 2 July 2019
Shirka la dagaalanka xag-jirnimada oo Jabuuti lagu qabtay
Dalka Jabuuti ayaa waxa shalay ka furmay shir lagu casuumay aqoon-yahannada diimaha Islaamka iyo Kiristanka oo looga hadlayay sidii loola dagaalami lahaa fikaradaha xag jirka.
Islaamiyiinta Sudan oo Caqabado Wajahaya
Islaamiyiinta Sudan ayaa caqabado kala kulmay xilli kala guurka Sudan. waxayna haatan doonayaan inay qeyb ka noqdaan dadaalka la doonayo in xukumad ku meel gaar ah loogu dhiso Sudan.
Sudan: Meydad laga helay Omdurman
Madaxweynaha Tunisiya oo Isbitaal la Dhigay
Lataliyaha madaxweynaha Tunisiya ayaa sheegey inaysan muuqan halis ah marnaasho awooded, kadib markii madaxweynaha dalkaasi Beji Qa'id Al Sebsi isbitaal loola cararay.
Jabuti oo Laga Xusay Maalinta Xorriyada ee 27-ka June
Dalka Jabuti waxaa maanta laga xusay Maaalinta Xoriyadda oo ku beegan 27-ka bisha June oo ah maalinti ay xornimada ka qaadatay Gumeystihii Faransiiska.
Xubno ka tirsan xisbiga Amxaarada oo lagu xiray Itoobiya
Booliska Itoobiya ayaa xiray 56 qof oo xubno ka ah xisbiga siyaasadeed ee Amxaarada kadib afgambigii fashilmay ee la doonayey in lagula wareego awoooda gobolka, waxaa sidaas sheegay afhayeenka xisbiga.
Munaasabado lagu xusayo 26-ka Jun oo la qabtay
Dhammaan geyiga Soomaalida waxaa maanta laga xusayaa maalinta 26-ka Juun oo ahayd makrii ugu horraysay ee dhul Soomaaliyeed uu ka xoroobo gumaystihii Biritan sannadkii 1960kii
Weerar ka dhacay Masar oo lagu dilay saraakiil boolis
Toddoba sarkaal oo boolis ah ayaa lagu dilay weerar jihaadi ah oo ka dhacay Waqooyiga Siinaay ee dalka Masar, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha dalkaas.
Falanqeyn: Xiisadda Dalka Ethiopia
Dalka Ethiopia waxaa fiidnimadii shalay ka dhacay isku-day af-gambi oo abaabulan, kaas oo lagu sameeyay hoggaanka sare ee xukuumadda Amxaarada ee dalkaasi. Intii ay socdeen weerarrada isku-daygan af-gambi ayaa waxaa lagu dilay Dr. Ambachew Mekonnen ahaa madaxweynihii gobolka Amxaarada
Ethiopia: Taliyihii Ciidamada Qalabka Sida oo La dilay
Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in taliyihii ciidamada qalabka sida Seare Mekonnen xalay lagu dilay gudaha magaalada Adis Adaba, saacado kaddib markii gobolka Ismaamulka Amxaarada uu dhacay iskuday afganbi oo lagu dilay madaxweynihii gobolkaasi.
Doorashada Madaxtinimada ee Mauritania
Shacabka waddanka Mauritania ee galbeedka qaaradda Africa ayaa maanta oo Sabti ah u dareeray goobaha cod bixinta si ay u soo doortaan madaxweyne.